Yohane Adiyisɛm 12 NA-TWI - Ɔbea no ne ɔtweaseɛ no - Afei - Bible Gateway
Yohane Adiyisɛm 12
Yohane Adiyisɛm 11Yohane Adiyisɛm 13
Yohane Adiyisɛm 12 Nkwa Asem (NA-TWI)
Ɔbea no ne ɔtweaseɛ no
12 Afei nsɛnkyerɛnne kɛse bi daa ne ho adi wɔ soro. Ɔbea bi, na n’atade yɛ owia a ɔsram wɔ ne nan ase, na nsoromma dumien ahenkyɛw hyɛ no. 2 Na ɔyem a ɔrebɛwo, na awoyaw nti, na ɔresu.
3 Nsɛnkyerɛnne kɛse foforo bi daa ne ho adi wɔ soro. Ɔwɔ kɔkɔɔ kakraka bi, na ne ti yɛ ason na ɔwɔ mmɛn du a ahenkyɛw hyehyɛ biara so. 4 Ɔde ne dua twee nsoromma a ɛwɔ soro no mu nkyɛm abiɛsa mu baako tow wɔn guu fam. Ogyinaa ɔbea a ɔrewo no anim sɛnea ɛbɛyɛ a ɔwo ɔba no to hɔ ara pɛ, ɔbɛfa abofra no awe. 5 Afei ɔbea no woo abarimaa a, ɔde nsa a ɛyɛ den bedi aman nyinaa so. Nanso wohwim abofra no kɔɔ Onyankopɔn ne n’ahengua ho. 6 Ɔbea no guan kɔɔ sare so baabi a Onyankopɔn asiesie ama no a wɔbɛhwɛ no yiye wɔ nnafua apem ahanu ne aduosia mu.
7 Afei ɔko sii soro hɔ. Mikael ne n’abɔfo ko tiaa ɔwɔ no, ɛnna ɔno nso ne n’abɔfo ko tiae. 8 Nanso wodii ɔwɔ no so na wɔamma ɔne n’abɔfo antena soro bio. 9 Wɔtow ɔwɔ kakraka no kyeneee. Ɔno ne ɔwɔ dedaw no a wɔfrɛ no ɔbonsam a, ɔdaadaa wiase nyinaa no. Wɔtow no guu fam a n’abɔfo nyinaa ka ne ho.
10 Afei metee nne dennen bi wɔ soro a ɛka se, “Afei na Onyankopɔn nkwagye aba! Afei na Onyankopɔn akyerɛ ne tumi sɛ ɔyɛ Ɔhene! Afei na Mesia akyerɛ ne tumi, efisɛ, yɛn nuanom no ahohorabɔni a ogyinaa Onyankopɔn anim bɔɔ wɔn ahohora awia ne anodwo no, na wɔapam no afi soro no. 11 Yɛn nuanom no nam Oguammaa no mogya so ne nokware a ɔdaa no adi so dii ne so nkonim. Na wɔasiesie wɔn ho sɛ wɔde wɔn nkwa bɛto hɔ na wɔawuwu. 12 Enti mo ɔsoro ne mo a motete hɔ no, momma mo ani nnye. Afei asase ne ɛpo nnue! Efisɛ, ɔbonsam no atoa mo na ne bo afuw efisɛ, onim sɛ, ne bere a aka sua.”
13 Bere a ɔwɔ no hui sɛ wɔatow no agu asase so no, ɔtaa ɔbea a wawo abarimaa no. 14 Wɔmaa no akɔre ntaban akɛse abien sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi atu akɔ baabi a ɔwɔ wɔ sare so hɔ a wɔbɛhwɛ no mfe abiɛsa ne fa sɛnea ɔwɔ no renni n’akyi bio.
15 Afei ɔwɔ no puw nsu te sɛ asubɔnten dii ɔbea no akyi sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛfa no. 16 Nanso asase boaa ɔbea no. Ebuee n’anom nom nsu a ɔwɔ no puw guu hɔ no nyinaa. 17 Ɔwɔ no bo fuw ɔbea no, enti ɔkɔe de ntɔkwaw kɔkaa ɔbea no asefo a wɔaka no a ɛyɛ wɔn a wodi Onyankopɔn mmara so na wogye nokware a Yesu ada no adi no di no. Na ɔkogyinaa mpoano hɔ.